ह्याप्पी ‘भालेटायम’ डे ! – मझेरी डट कम
१४ फेब्रुवरीका दिनमा कुसुन्तीले बिरुपेलाई ‘रेड रोज’ थमाउँदै भनी- ‘मेरो प्रिय विरुपे ! पल्लो घरको भरते, वल्लो घरको विदुरे, तल्लो घरको नविने र माथ्लो घरको झम्केको कसम ! भञ्ज्याङ्को दिक्पाल र ओलकको फुर्वालाई छोड्ने हो भने मन्दिपे, सुर्जे, विनोदे, लालु, कमले, गब्बा, अम्बरे, मालु, रने, मञ्जिले, चक्रे, बले, सुन्सा, कर्ने, निशान, राजेश, दिपके, बसन्ते र जिवुलेलाई नगन्दा तिमी मेरो फस्ट लभर/ब्वाइफ्रेण्ड हौ ।’
उसले थपि- ‘तिम्रो यो खाइलाग्दो जिऊ देखेपछि मलाई घिऊसँगको भात पनि रुच्न छोडेको थियो र फुकी माग्न जोगवीरे धामीको छोरा मानवीरेलाई भेट्न सातामा तिन चोटीसम्म गएकै हुँ । घरैको धाराको पानी नरुचेर लभडाडाँमुनीको पँधेरोमा उतैको ऐँठेसँग पानी लिन नगएकी हैन । हेर, मलाई निद्रा नपरेर चुम्बकध्वजकी छोरीकामा जाने बहाना बनाएर गोबरध्वजका चार छोराहरू पिलन्धरध्वज, लम्पटध्वज, खप्परध्वज र पापडध्वजसँग चार रात विताएकै हुँ । रै पनि तिम्रो सम्झनाले रनाको छुटाएपछि म तिमीलाई भेट्न आएकी छु ।’
उसले जोड दिँदै भनी- ‘आजैका मितिमा तिमीले मलाई र मेरो पवित्र/पहिलो प्रेमलाई स्वीकार गर्यौ भने म आफूलाई धन्य ठान्नेछु । जीवनमा आफुले रोजेको बर पाउनु र खोजेको घर पाउनु ठूलो कुरा हो भनेर मेरी आमाले पोइला जानुअघि भनेकी थिइन् । तिम्रो पहाडजस्तो छाती र दरबारजस्तो घर देखेर म यो काँडैकाँडाको बाटो टेकेर आएकी छु । तिमीले मलाई तिम्री धर्मपत्नि मान्यौ भने म तिमीलाई कहिल्यै गुनासो गर्ने ठाऊँ नदिने बाचा गर्छु, महावीरेलाई जस्तै । बैदारचोकको रमेशे, शुक्रबारेको रजुवा र बेलडाँगीको बाघेलाई दिनमा एकचोटी पनि याद गर्ने छुइँन । बरु तिमी मेरो छोरो पोष्टेलाई अस्वीकार गर, बिन्ति म सुकुमारीलाई स्वीकार ।’
उसले नम्र भएर सम्हालिँदै एकै सासमा थपी- ‘हाम्रो खान्दानमा चोखो प्रेम गर्ने परम्परा छ । मेरी ठूली दिदीले तेस्रो घरबार नबिग्रेको भए सातौँसम्म पुग्नुपर्ने नै थिएन । पछिल्ला भिनाजुले ६ जना भण्ट्याङ्भुण्टुङ्सहित दिदीलाई नयाँ दुलहीका रुपमा भित्र्याएकै हुन् । तिमी नै सोच न, मेरी दिदीले कत्रो कृति राखी । मान्छेलाई नाम राख्न कति गाह्रो छ अचेल !’
उसले नम्र भएर भनी- ‘झन् माइली दिदीको त के कुरा गर्नु ? उसको प्रेम कहानी त देश विदेशमै चर्चित छ । दिल्लीमा दुई बर्ष बिताएर आएकै महिनामा बम्बइ गएर छत्तिस महिनापछि फर्किए लगत्तै खाडी गएकी छे । उसले त पैसा मात्र हैन, परिवार पनि कमाएकी छे । नपत्याए मेरी सानीमालाई अहिले फोन गरेर सोध । उसका तिनजना अनेक रंग र वर्णका छोरा घरैमा र्हुिकँदैछन् । भर्खर भन्दैथिइ, पेटमा अर्को पनि बढ्दैछ रे । पैसा पनि आठ महिनामा तीस हजार पठाइसकी ।’
ऊ आत्मसम्मानका साथ अगाडि भन्दै गई- ‘मेरी साँइली दिदीको पनि जिन्दगी कम्ती जोशिलो छैन । ऊ भनेपछि त गाऊँका मात्र हैन सहरका जोइटिंग्रेको पनि होषहवास उड्थ्यो । उसका पछि लाग्नेको ताँती देखेर सजै जिल पर्थे । तर उसले कहिल्यै नराम्रो काम गरिन । बरु सवैका रहर पुर्याइदिई । अहिले एउटा नेपाली निलो फिलिममा पनि मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी छे । अचेल त उसको चर्चाले चुली चुमेको छ । सवै दिदीहरूले नाम राखेका छन् । सवैको हाइहाइ छ जताजतै । हाम्रो खानदानको नाम नलिने कोही छैन भन्दा पनि खेर जाँदैन बुझ्यौ ! आजबाट म पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु । तिमी मेरो स्वच्छ, पवित्र, पहिलो र चोखो मायालाई स्वीकार गर ।’ यति भनेर केही छिन अघि उसलाई नेत्रेले सुम्पेको ‘गिफ्ट प्याक’ विरुपेलाई दिएर उसले कुरा सकी ।
प्रतिउत्तरमा विरुपेले भन्यो- ‘मैले पनि तिमीलाई डान्स बारमा देखेदेखि हुरुक्क भएको मनलाई सम्हाल्न सकेको छैन । तिम्रो रुपरंग देखेर म त्यतीवेलै दंग परेको हुँ । झन् क्याविन रेष्टुरेण्टमा तिमीलाई देखेपछि त मैले मास्तिरकी सुन्तली, तल्तिरकी मनमाया, वर्तिरकी पातली र पर्तिरकी जूनठुलीलाई त हेर्नै छोडेको छु । त्यती मात्र कहाँ हो र ! भट्टीवालनीहरू उँभोकी साइँली, उँधोकी काइँली, तलकी कान्छी र माथिकी ठूलीकान्छीलाई त भर्खरै विर्सिसकेँ । त्यसमाथि पनि पल्लो गाऊँकी पार्वती, वल्लो गाऊँकी ऐँशेलु, डाँडागाऊँकी जुनेली र गैरागाऊँकी गायत्रीलाई त म चिन्दा पनि चिन्दिन । सुन्छ्यौ, दोबाटोकी दिलमाया, तिनबाटोकी टिकुली, चौबाटोकी चाँदनी र मुलबाटोकी मारुनी त झन् को हुन् को हुन् ? धरोधर्म म तिनलाई देखे पनि चिन्दिन । बोले पनि बोल्दिन ।’
उसले अगाडि थप्यो- ‘तिम्रै कसम भो, जुवाघरकी जेसिका, पँधेराकी पूर्णिमा, नर्सरीकी नर्बदा, बगैँचाकी बाटुली र खेतखलियानकी खस्रीलाई अबदेखि यादै गर्दिन । याद मात्र हैन, तिनेरका बारेमा सोच्दा पनि सोच्दिन । तिमीलाई दोहोरी साँझमा तिनपल्ट भेटेदेखि फिल्महल मालिककी छोरी पर्दा र गेटकीकी छोरी टिकटीको त मलाई मतलब नै छैन । हेरन, मैले ड्राइभरकी छोरी टायरी, पुलिसकी छोरी लौरी, घुम्तीवालकी छोरी गुट्खी र माष्टरकी छोरी डस्टरलाई नभेट्ने बाचा नै गरिसकेँ नि !’
उसले सालिन शैलीमा भन्यो- ‘मेरो खान्दानको पनि कुरा गरी साध्य छैन बुझ्यौ ! मेरो ठुल्दाजु त भाउजुले आत्महत्या गरेदेखि सानदार जेलमा छ । उसले भाउजुलाई कति माया गथ्र्यो भने खाना पकाउने, लुगा धुने, घर सफा गर्ने आदि सवै काम भाउजुलाई गर्न लाउँथ्यो । त्यति मात्र कहाँ हो र ! राती सुत्दा पनि भाउजुलाई साह्रोगाह्रो पर्छ भनेर अर्कै सुसारे राखेको थियो । उसैसँग धेरैजसो सुत्थ्यो । भाउजुले माइतमै बसौँ भन्दा पनि खुरुक्क गएर उतै बस्दै गरेको मेरो दाजु कति स्वाभिमानी थियो, तिमी आफैँ मनन् गर ।’
माल्दाजुको प्रेम कथा सुन्यौ भने त तिमी छक्क पर्छ्यौ । ऊ त छिमेकीकी श्रीमती भगाएर गाऊँभरि साहसी युवा भनेर चिनिएको छ । प्रवासिएको लोग्नेकी जोइलाई भगाउन कुन आँट चाहिन्छ ! तिमी अनभिज्ञ छैनौ । तिनै माइली भाउजुका खाताको पैसा झिकेर लाहुरेनीलाई लिएर हिँडेको दाजु आजसम्म घर आएको छैन । हिजै मात्र लाहुरेनी चाहीँ आइपुगी । गाऊँकी आइमाइलाई विहानै मात्रै दाजुले उसैकी छोरीलाई लिएर हिँड्यो भनेर भन्दै थिई रे ।’
ऊ भन्दै गयो- ‘साँल्दाजुको कुरा त भो नसोध । हरिलम्फुका घरमा हली बस्न गएको बर्ष दिन भएको छैन, हरिका पाँचै जना छोरीहरू जो केटा माग्न आए पनि झ्याइँ नपार्ने भनेर भन्दैछन् भनेर माइतमा छोडेकी मेरी साइँली भाउजुले फोनमा भन्दै थिइन् । हरिका मरन्च्यासे छोरीहरू के खाएर हो, अहिले त माटाको गाग्री जस्तै मोटाएका छन् भन्ने कुरो सुनेको छु । हरि पनि हारदिक्क भएर भिरबाट हाम्फाल्यो अरे भन्ने समाचार त अलिअघि बकम्फुसे रेडियोले फुकेको थियो । नपत्याए मेरा बुवालाई सोध, मलाई त रेडियोले सुनाउनु अघि नै मेरी तेस्री आमाले भनेकी थिइन् । अब तिमी आफैँ बिचारविमर्श गर, हाम्रो खान्दान कति चर्चित र लोकप्रिय रहेछ ।’
उसले बिट मार्नेगरि भन्यो- ‘तिमीसँग म जीवनको शुरुवात गर्न चाहन्छु, यसअघि कालीमायासँग जस्तै । मेरो निश्चल मायाको कदर गरेकीले तिमीलाई म आजैबाट मेरी पत्नि स्वीकार गर्दछु । साथै तिमीले जसरी मेरी पतिब्रता हुन्छु भनेर भनेकी छौ त्यसरी नै म पनि तिम्रो मात्र पतिब्रता हुनेछु (अरु कोही पछि नलागेसम्म) ।’ यत्ति भनेर बिरुपेले पनि आफूलाई दुई घण्टाअघि मालतीले दिएको ‘रेड रोज’ कुसुन्तीलाई थमायो र फूलमायाले दिएको ‘गिफ्ट ह्याम्पर’ हातमा राखी दियो । त्यसलगत्तै दुवै जना ‘हग’ गर्न थाले ।
मेरा र राजधानी अन्तराष्ट्रियका तर्फबाट पनि देशविदेशमा हुने करोडौँ कुसुन्ती र बिरुपेहरूलाई- ह्याप्पी ‘भालेटायम’ डे !